Fizahan-tany Koreana Avaratra: manitsakitsaka ny sazy avy amin'ny ONU ve izany?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany Koreana Avaratra: manitsakitsaka ny sazy avy amin'ny ONU ve izany?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Travel Wire News • malaza ankehitriny
manatsara 5 1
Ny Tendrombohitra Kumgang na ny Tendrombohitra Kumgang dia tandavan-tendrombohitra / tendrombohitra, misy tendrony Birobong haavo 1,638 metatra, any Kangwon-do, Korea Avaratra. Sahabo ho 50 kilometatra miala ny tanànan'ny Sokcho any Korea Atsimo any Gangwon-do.
Ny fanokafana ny Tendrombohitra Geumgang ho an'ny fizahan-tany dia tsy manitsakitsaka sazy, hoy ny filoha Moon Jae-in ny zoma, ary nanampy ny fitantanan-draharaham-panjakana hitarika fomba vaovao hanatanterahana ilay tetikasa iraisan'ny Koreana iraisana.
“Mikasika ny tetikasan'ny fizahan-tany Mount Geumgang, ny fizahan-tany dia tsy manitsakitsaka ny sazy ataon'ny United Nations Security Council (UNSC). Fa ny zava-dehibe dia ny famindrana ny fandoavam-bola dia zavatra mety hanitsakitsaka ny sazy ara-toekarena, ”hoy ny filoha Moon tamin'ny nanombohan'ny fivoriana fisakafoanana niaraka tamin'ny corps press Cheong Wa Dae natao tao Nokjiwon tao amin'ny biraon'ny filoha, araka ny tatitra nataon'ny pool pool.
Nilaza i Moon fa hanenjika “fomba vaovao” ny governemanta Koreana Tatsimo mba hamerenana amin'ny laoniny ny fandaharam-pizahan-tany iraisan'ny Koreana. "Noho ny sazy mihatra amin'ny UNSC dia sarotra ny mandroso amin'ny fomba efa misy," hoy i Moon. Mikasika ny andinindininy amin'ny "fomba vaovao" dia tsy namelabelatra ny filoha.
Ny fanamarihany dia tonga ora vitsy taorian'ny nanaovan'ny minisitry ny firaisana tany atsimo ny tolotra avy any Korea Avaratra hiresaka ny olana mifandraika amin'ny niafaran'ireo trano sy tranobe vita avy any Korea Atsimo tao amin'ny toeram-pitsaboana any Korea Avaratra, taorian'ny nandidian'ny mpitarika Koreana Tavaratra Kim Jong-un ny fandravana azy ireo. .
Miaraka amin'ny Kompleks indostrialy Gaeseong, ny tetikasa Mount Geumgang dia tetik'asa fandraharahana iraisam-pirenena Koreana hafa. Rehefa nitana ny fihaonany farany tamin'i Moon i Moon tamin'ny volana septambra 2018 tao Pyongyang, dia nanaiky ny hanohy ny fiaraha-miasa amin'ireo roa ireo tetikasa ara-toekarena mihantona ireo ny roa tonta, izay loharanom-bola koa ho an'ny Avaratra voafefy sy mahantra.
Ny Filoha Moon dia nanamafy ny hevitra amin'ny fanolorana fameperana sazy ho an'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump sy ireo mpitarika an'i China, France, Russia ary ny United Kingdom, ireo firenena dimy manana toerana maharitra ao amin'ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana. Saingy zava-poana ny ezak'i Moon, satria ny sazy sasany dia sarotra kokoa noho ny hafa ary mikasika ny sazy mihabe kokoa.
Tamin'ity taona ity, nampiroborobo i Kim fa hanova ny laharam-pahamehany amin'ny raharaham-panjakana izy mba hanamafisana ny harinkarenan'ny fireneny. Raha ny filazan'ny mpandinika politika dia mitaky fanamaivanana ny sazy henjana izany, fahazoana fanampiana avy any ivelany bebe kokoa ary fisarihana famatsiam-bola avy any ivelany bebe kokoa.
Saingy natahotra i Washington sao hanitsakitsaka ny sazy UNSC manolotra fiantohana loza ara-politika ny fanokafana ny tranobe indostrialy sy ny toeram-pitsangantsanganana Mount Geumgang ary hitarika ny famindrana “vola betsaka” any Korea Avaratra.
Nandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ny denuclearization teo amin'ny sehatry ny asa teo amin'i Washington sy ny mpirakidraharaha Pyongyang, dia nanolotra “fanamaivanana sazy voafetra” i Etazonia ka mamela ny Avaratra hanondrana akora sasany toy ny arintany. Saingy tsy nanaiky ny tolotra ny Avaratra satria ny fepetra voasazy voafetra dia tsy "ampy tsara" ho tombontsoa ho setrin'ny fanolorana ireo dingana feno denuclearization feno sy feno.